Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Marroo: 'Walitti bu'insi gama lachuunu bu'aan argamsiisu tokkollee hin jiru' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Suuraan marsaalee hawaasaa irraa fudhatame
Aanga'oonni mootummaa rakkoo kanaaf waraana ABO lixa buufatee jiru himatu.
Erga ABO'n Finfinneetti deebi'e as gama Lixa biyyattiin maqaan isaa irra deddeebbiin kan dhagahamaa jiru ajajaa waraana ABO Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa ykn Marroo waliin turtii addaa taasifneerra.
BBC: Kaayyyoon waraana gama Lixaa jiru maali jedhani kan gaafatan baay'eedha. Kaayyoon isaa maali?
Marroo: Fedhiin Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) uummata Oromoo irraa waan adda ta'e miti. ABO saba Oromoof jecha dhaabbate.
Kanarraa kaase, waraanni bilisummaa Oromoo addatti fedhii of danda'e mataa isaa hin qabu. Fedhii ummata Oromooti tiksa.
BBC: Kanaan dura gama Lixa Oromiyaatti akka Obbo Daawud waliin wal agartani dubbattan quban qaba. Maal mari'attan?
Yeroo hundayyuu waan dhaaba keenyaa irrattiifi adeemsa ittin adeemnu irratti karaa adda addaa mari'anna.
Kan yeroo darbe jaal Daawud gara keenya dhufani haasofnes waan adda tahe hin qabu. Mariidhuma dhaabichi yeroo hundaa wal mari'atu.
Wanti adda ta'e hinjiru. Ummanni Oromoo hundi kabeeku, 1fi 1 meeqa jedhani nama gaafachuu irraa waan adda ta'e miti jechuudha.
Marroo: Abbumti waan kana maxxanse, social media (miidiyaa hawaasummaa) irratti baase akkaataa itti argate ibsuurraa ka'e anamoo ana miti inni adda siif baasuu danda'a.
BBC: Karaa nagaadhaan qabsaa'uudhaaf ABO'n mootummaa waliin waliigale Fulbaana keessatti biyyatti galuun isaa ni yaadatama. Akkasumas magaalaalee adda addaatti waajjira banaa jira. Gama kaaniin waraannis immoo ni jira. Waajjira banachaa waraana leenjisuun waliin deemaa? Kana akkamin ilaaltu?
Marroo: Dhaaba qabna. Anaan akka dhuunfaatti yoo nagaafatte, anaafi sii yaada dhuunfaa kiyyaa siif hiruurraan kan hafe dhimma dhaabichaa waligalaa jaarmiyaatu deebii itti kenna waan ta'ef …ibsa dhaabni nuuf kennu karaa nudhaqqabeen hojiitti hiikna.
Marroo: Waa'ee maatii tokko kan maatii sana utubutu murtii kenna. Kanaaf, waan hangana salphataati.
Anaan akkasitti nagaafachuurra kaampiitti haa deebi'u diida haa taa'u inni kuni murtii waliigalaa jaarmiyaa Addi Bilisummaa Oromoo murteessu sanuma hojiitti hiiku.
BBC: Hoggantoonni Godina Kaamaashii ajjeefamuun isaaniin walqabate lammiileen buqqa'aa turan. Ajjeechaan sukaneessaa mudataas ture. Ajjeecha hoggantoota kanaaf kan itti gaafatamu ABO dha jechuun qondaaltonni Benishaangul akkasumas dhiheenya immoo Obbo Lammaa Magarsaan dubbataniiru. Waraanni keessan kana raawwateeraa?
Gama Gumuzin yoo ilaalte, gama mootummaan yoo ilaalte, gama keenyaanis yoo ilalate humni naannoo kanatti kallattii adda addaarra hidhate sosso'u hedduu ta'e keessatti Waraana Bilisummaa Oromoo qofaatti quba qabuuni hin danda'amullee, hin taatulle.
Wanti suni qaama walabaa qorate bakka yakki jiru baasu danda'u qofaatu isa kana baasuu danda'a.
Wal waraana keessa caasaa mootummaa siwaraanu bulchinsasaa, milishaa, poolisii, waraana hundumaa, tika, basaasa diiguun dirqamuma ta'a. Diigamaa ture.
"Ani akka mataa kiyyaatti bilisummaa hin qabu"
Mootummaanis hin fudhate. Erga dhukaasa walirraa dhaabu mallattaa'e wanti kun takkaa hin taane.
Naamusa waraanni qabaatu qabuuni WBO dachee kanaan dura bilisoomsetu jira. Sanarra qubateetuma taa'a.
Haa ta'u malee, dhukaasa dhaabun yeroo hundaa cabaadha jira. Mootummaan sababoota adda addaa hin taane dhiheeffachuun waraana yeroo hundaa sochoosuutu mul'ata.
Garuu, bakka qubanne jirrutti waraanni mootummaa yeroo nutti sosso'u ofirraa ittisuutu dirqama ta'aa jechuudha.
Kanaan dura lolarra turame. Wal waraanaa turre. Kan lolli dhaabbateera jedhame asitti garuu wanti kuni himannaa dharaarraa kan hafe sababa ittiin waraana kana irratti dhukaasa banuuf qophii tolfame yoo ta'erraa addatti caasaan akkasitti diigames hin jiru.
BBC: Mootummaan sababa rakkoo nagenyaaf gara Lixaatti waraana bobbaasaa tureera. Miidhaa hangamii isin irraa geessise yookiin immoo walitti bu'insa akkamiitu dhalate?
Marroo: Walitti bu'iinsa kana keessatti nuti waraana waan dhufe ofirraa ittisuuf nidandeenya. Ga'umsa isaas dandeettii isaas qabna.
Waraanni Bilisummaa Oromoo akka waraanaatti dhukaasa dhaabu akkuma kabajetti jira. Garuummoo, humna irratti bobba'e ofirraa ittisuutti argama. Ofirraa ittisuttis jira.
Inni kuni garuu gama lachuunu bu'aan argamsiisu tokkollee hin jiru. Asiinis koottu achiin kan ajjeefamaa jiru Oromoo.
Kan hir'ataa jirus lakkoofsa ilmaan Oromooti. Kan waraana mootummaa keessaa irri guddaan isaa asitti bobbaafame jiru ijoollee hiyyeessaa waraanatti galchanidha. Bu'aa nubuusuus hinqabu.
BBC: Waraanni Bilisummaa Oromoo lafa hangami to'ateera gama Lixaatiin?
Marroo: Gamnummaa yookaani barcuma siyaasaa kan dhuunfaa ofii tikfachuuf jecha shira adda addaa dalaguu osoo hintaane bu'aa ummata Oromoo yoo dursine rakkoon kuni halkan tokkotti furmaata argata.
Yoo bu'aa ummata Oromoo caalaa bu'aa barcuma aangoo siyaasaa tiksuuf hojjenna taate garuu yoomiyyuu furmaata hinargatu.
BBC: Ministirri Muummee erga gara aangootti dhufani as akka biyyatiittuu deeggarsa bal'aa akka qabanitti amanama. Jijjiirama hedduus akka fidanitti amanama.
Haala amma jirun dirreen siyaasaa bal'ateera meeshaa qabatani laga seenani qabsaa'uun hin barbaachisu yaada jedhu xinxaltoonni siyaasaafi hoggantoonni siyaasaa ni dubbatu. Yaadi keessan maali?
Marroo: Waa'een waan kanaa kan deebii siif kennuu danda'u qaama olaanaa dhaaba kenyaati siin jedheera.
Akka yaada dhuunfaa kiyyaatti waan hedduu siin jechuu nan danda'a. Sun yaada mataa kiyyaati ta'a malee yaada jaarmiyaa kiyyaa ibsuu dhiisuu ni danda'a.
BBC: Adda Bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromootu dhalche. Waggaa dheeraafis qabsaa'aa ture. Haala amma jirun Oromoon bilisoomeera jettanii yaadduu? Yoo hin bilisoomne jettanimmoo yoo maal ta'e bilisooma?
Marroo: Akka mataa kiyyaatti ani bilisummaa mataa kiyyaa hin qabu. Sabnimmoo kan isaa deebii itti kennachuu ni danda'a.
BBC: Gama Lixaatiin waraanni haaraa leenji'aa jira namoonni hedduun bosona seenaa jiru yaadi jedhu gama mootummaatin ni ka'a. Dhimma kana irratti yaadni keessan maali?
Marroo: Leenjiin adda ta'e erga lolli dhaabachuun labsame asitti ta'aa jiru tokkolleen hinjiru.
Waliigaltee ABOfi ODP: "Qawween siyaasa keessaa akka bahu waligalleerra"
Qondaalli tikaa duraanii Ruwaandaa 'mobaayila hatuun' waggaa sadi adabame